काठमाडौंमै चल्छन् कोठी, बेचिन्छन् रचना र दक्षिणा::KhojOnline.com
माघ, काठमाडौं । गत आइतबार मध्यराति २ बजे नेपाल प्रहरीको १०० नम्बरमा एक महिलाले रुँदै फोन गरिन्– मलाई साहुनीले कुटेर मार्न लागिन्, कृपया तपाईहरु आएर बचाउनुस् । लगातार तीनपटक उनले फोन गरेपछि केहीबेरमै बालाजु र महाराजगञ्जको प्रहरी टोली गोंगबु बसपार्कसँगैको कविता खाजाघरमा पुग्यो ।
त्यस दिन दक्षिणा सुवेदीले दिनभरिमा ३२ जना ग्राहकको चित्त बुझाइसकेकी थिइन् । थाकेर बसेकी उनलाई ‘कोठीवाली’ले दुईजना फुच्चे आएका छन्, आज राति यतै बस्ने भन्छन्, चित्त बुझाउनू भनिन् । अञ्दाजी १४/१५ वर्षका किशोर रक्सी र गाँजाको नशामा थिए । तीमध्ये एक दक्षिणासँग गए भने अर्का रचनासँग सुत्न गए ।
आखिर किन गरीव र बेसहारामाथि नै यस्ता दुःखका पहाड खस्छन् ? के यिनीहरुले सम्मानका साथ बाँच्ने समाज कहिल्यै बन्दैन ? अनुत्तरित प्रश्नको भारी बोकेर फर्कियौं हामी ।